Barlamaanka Somaliya oo ka hor-yimid in Amniga Muqdisho loo Gacan Galiyo M.Gobolka Banaadir – Radio Daljir
Barlamaanka Somaliya oo ka hor-yimid in Amniga Muqdisho loo Gacan Galiyo M.Gobolka Banaadir
Maarso 1, 2016 6:53 b 0
Burtinle, 01March, 2016 -(Daljir)_Qaarka tirsan Xildhibaanada dowladda Fadaraalka Soomaaliya ayaa ka horyimi amaanka Muqdisho oo lagu wareejiyey maamulka gobolka Banaadir.
Xildhibaanada ayaa sheegay in xiligan aan maamulka Banaadir lagu wareejin karin amanka Caasumadda,xubnaha ka tirsan baarlamaanka ayaa hadalkan ka sheegay dood ay ka yeesheen amaanka Muqdisho.
“Waxaan ka xumahay amni darada soo korortay,iyo dayaca badan oo sababay iney dad badan ku dhintaan, taasi ayaa keentay in hadalo ay soo dhex baxaan, waad la socoteen in amniga Muqdisho lagu wareejiyay duqa Muqdisho, awoodaas halkuu ka keenay taliyaha nabad sugida ma hogaanbaa”ayey tiri Khadiijo Maxamed Diiriye oo kamid ah xildhibaanada ka horyimi in amaanka Muqdisho lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir.
Waxay Xildhibaanadu sheegeen in talaabada uu sheegay Taliyaha Nabad sugida ay tahay mid aan macquul ahayn, amniga Muqdishana loo baahan yahay Ha’yadaha amaanku inay gacanta ku hayaan.
Hadalka Xildhibaanada ayaa umuuqda mid ay ka cabsi qabaan in amaankoodu faraha ka baxo, mar hadii sugida amniga Caasumadda lagu wareejiyo maamulka gobolka Banaadir.
Shir ay dhawaan Ha’yadaha amaanka dowladda Fadaraalku ku yeesheen Muqdisho ayey isku raaceen in amaanka Xamar lagu wareejiyo Maamulka Banaadir,arintan ayaa kusoo aaday xili ay Qaraxyo kala duwan ka dhaceen magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, halka Kismaayana ciidamadana Amaanku fashiliyeen.
DHAGAYSO:Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Talaado_01-March